LBI Media Inc. ၏ KBUE-FM၊ နံပါတ်တစ်လော့စ်အိန်ဂျယ်လိစ်ရေဒီယို NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
SmallHD သည်ကိုးကားစရာအဆင့် 4K OLED ကိုထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သည်
Broadcast Pix သည် 0% StreamingPix စနစ်များအတွက်ရန်ပုံငွေကိုကြေငြာခဲ့သည်
Sara Glaser, CAS နှင့်အတူအသံ Insight
Markertek နှင့် TecNec မှတစ်ဆင့် Studio Technologies ထုတ်ကုန်များကိုရနိုင်သည်
ပင်မစာမျက်နှာ » အသားပေး » LBI Media Inc. ၏ KBUE-FM - နံပါတ် ၁ လော့စ်အိန်ဂျယ်လိစ်အသံလွှင့်ဌာန
LBI Media Inc. ၏ KBUE-FM - နံပါတ် ၁ လော့စ်အိန်ဂျယ်လိစ်အသံလွှင့်ဌာန
LBI မီဒီယာ, Inc, ထိပ်တန်းအမေရိကန်နှင့်ဟစ်စပန်းနစ်စျေးကွက်အားလုံးတွင်လည်ပတ်နေသော ဦး ဆောင်ဒေါင်လိုက်ပေါင်းစပ်ပြီးပေါင်းစုံပလက်ဖောင်းစပိန်ဘာသာစကားမီဒီယာကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည်။ နှစ်စဉ်အခြေခံ LBI မီဒီယာ, Inc 2,500 နာရီအတွင်းမူရင်းတီဗီအစီအစဉ်၏နာရီပေါင်းများစွာကိုထုတ်လုပ်သည် အင်ပါယာ Burbank ရုပ်မြင်သံကြားစတူဒီယို။ ဒီမီဒီယာကုမ္ပဏီဟာစပိန်ဘာသာစကားတီဗီအကြောင်းအရာများအတွက်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၏အကြီးဆုံးထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။
LBI ကမီဒီယာ, Inc ပြီးတော့ရေဒီယို
LBI မီဒီယာ၏ရေဒီယိုဂုဏ်သတ္တိများ ဂီတအမျိုးအစားများကိုဖုံးလွှမ်းသောစျေးကွက်ခေါင်းဆောင်များဖြစ်ကြသည်။ ဤအမျိုးအစားများသည်ဒေသဆိုင်ရာမက္ကဆီကန်နှင့်ရိုးရာ mariachi နှင့် ranchera မှသည် pop နှင့် oldies အထိမည်သည့်နေရာမဆိုရှိသည်။ LBI Media, Inc သည်ပိုင်နှင့်လုပ်ကိုင်သည် 17 ရေဒီယိုလိုင်းများ ယင်း၏စုစည်းနေစဉ်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကိုဖြတ်ပြီး Don Cheto ကွန်ယက် တိုင်းပြည်အတွင်းထက်ပို 31 စျေးကွက်များတွင်။ Don Cheto (လ Sauceda အဖြစ်။ ) “ El Hombre del Vozarrón” (“ အသံကျယ်သောသူ”) သည်မက္ကဆီကန်အမေရိကန်ပေါ့ပ်ယဉ်ကျေးမှုတွင်လူကြိုက်များသောစိတ်ကူးယဉ်မက္ကဆီကန်အမေရိကန်ရေဒီယိုနှင့်ရုပ်မြင်သံကြားကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးဖြစ်သည်။
LBI မီဒီယာ၏ရေဒီယိုအသံလွှင့်ဌာနအများအပြားတွင် -
ဤနှင့် LBI ၏ရေဒီယိုအသံလွှင့်ဌာနအများအပြားသည်ကုမ္ပဏီကိုဖွဲ့စည်းထားသည် ရေဒီယိုဂုဏ်သတ္တိများ.
KBUE-FM: နံပါတ်တစ် LA ရေဒီယိုအသံလွှင့်ဌာန
အောက်တိုဘာလ 2019, LBI မီဒီယာရေဒီယိုအသံလွှင့်ဌာန KBUE-FM၊ La Que Buena ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်၊ လော့စ်အိန်ဂျလိုတွင်နံပါတ်တစ်ရေဒီယိုအသံလွှင့်ဌာနအဖြစ်သတ်မှတ်ခံရသည်။ ဤစီးပွားဖြစ် FM ရေဒီယိုအသံလွှင့်ဌာနကို ၀ န်ဆောင်မှုပေးသည့် California ရှိ Long Beach သို့လိုင်စင်ချထားသည် Los Angeles မြို့ မြို့ပြareaရိယာ။ Liberman အသံလွှင့်ဌာန၏ပိုင်ဆိုင်မှုအပြင် KBUE-FM၊ La Que Buena ဒေသဆိုင်ရာမက္ကဆီကန်ရေဒီယိုပုံစံကိုထုတ်လွှင့်သည်။
ဤမကြာသေးမီကကြေငြာချက်သည်ဒေသဆိုင်ရာမက္ကဆီကန်ဘူတာ၊ KBUE-FM၊ La Que Buena ကိုစာရင်းပြုခဲ့ကြောင်းဖော်ပြခဲ့သည် #1 စပိန်မွန် - ဆွန် 6a - သန်းခေါင်စာရင်းသည်ဟစ်စပန်းနစ်အမျိုးသားများအကြား 18 ၏အသက်အရွယ်မှ 34 သို့။ ရေဒီယိုအသံလွှင့်ရုံကစပိန်စကားလည်းပါတယ် #1 18 နှင့် 34 အကြားအသက်ဟစ်စပန်းနစ်လူကြီးများနှင့်၎င်း၊ Don Cheto Al Aire နံနက်ကားမောင်းပွဲပြ, မွန် -Fri 6a-10a
KBUE-FM ကိုလည်းစပိန်ဘာသာအဖြစ်သတ်မှတ်သည် #1 Prime Time Mon-Fri 6a-7p သည်ဟစ်စပန်းနစ်ယောက်ျားများကိုအောက်တိုဘာလ 18 မှအောက်တိုဘာလအထိနှင့်ဟစ်စပန်းနစ်အမျိုးသားများနှင့်အတူမွန်းတည့်ချိန်တွင် 34-2019 အသက်အရွယ်ကြားတွင်နံပါတ်တစ်နေရာဖြစ်သည်။ ရေဒီယိုအသံလွှင့်ဌာနသည်စပိန်ဘာသာဖြင့်ထုတ်လွှင့်သည့်ထိပ်တန်းအသံလွှင့်ဌာနအဖြစ်သတ်မှတ်သည်။ 18-34 နှင့် 6-18 ကြားရှိအသက်အရွယ်ရှိဟစ်စပန်းနစ်လူကြီးများနှင့်အတူစုစုပေါင်းအပတ်အတွက်နားထောင်ခြင်း (TSL) Mon-Sun 49a-Midnight သည်အချိန်အားဖြင့်ရေဒီယိုအသံလွှင့်ဌာနအဖြစ်သတ်မှတ်ခံရသည်။
Que Buena ရေဒီယိုနှင့် Premios de la ရေဒီယို
တောင်ပိုင်းကယ်လီဖိုးနီးယားဒေသဆိုင်ရာမက္ကဆီကန်ရေဒီယိုအသံလွှင့်ဌာနဖြစ်သည်။ Que Buena ရေဒီယို အမျိုးအစား၏အပူဆုံးလုပ်ရပ်အချို့ကိုစတင်ခဲ့သောကြောင့်လူသိများသည်။ KBUE-FM သည်ထိပ်တန်းဂီတဆုပြပွဲ၏နောက်ကွယ်ရှိရေဒီယိုအသံလွှင့်ရုံဖြစ်သည်။ Premios de la ရေဒီယိုယူနိုက်တက်စတိတ်တွင်ဒေသဆိုင်ရာမက္ကဆီကန်ဂီတကိုတက်ကြွစွာကျင်းပပြီးအသိအမှတ်ပြုသည်။ Premios de la ရေဒီယို ၎င်း၏ 20 ကျင်းပလိမ့်မည်th နှစ်ပတ်လည်အခမ်းအနားကိုထိုင်းနိုင်ငံမှတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မည် EstrellaTV ကွန်ယက် 7P / 2019P C. နိုဝင်ဘာလ 8၊7တွင်၊ Premios de la Radio သို့လက်မှတ်ဝယ်ယူရန်ကိုနှိပ်ပါ။ ဒီမှာ.
LBI မီဒီယာ၏ EstrellaTV ကွန်ယက်
အဆိုပါ Estrella တီဗီပရိုဂရမ်းမင်းကက်တလောက် 7,500 နာရီကျော်ကျော်စပိန်ဘာသာစကားဖြင့်ရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်များပါ ၀ င်သည်။ ၎င်းသည်ယူအက်စ်တွင်ထုတ်လုပ်သောအမေရိကန်ဟစ်စပန်းနစ်စျေးကွက်အကြောင်းအရာ၏အကြီးဆုံးစာကြည့်တိုက်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ LBI Media သည်စပိန်ဘာသာဖြင့်ရေဒီယိုစွမ်းရည်နှင့်ပရိုဂရမ်းမင်းထုတ်လုပ်မှုအများဆုံးသောတီထွင်သူများနှင့်ထုတ်လုပ်သူများထဲမှတစ်ခုကိုလည်းလည်ပတ်သည်။ ကုမ္ပဏီ၏ Don Cheto ရေဒီယိုကွန်ယက်သည်နိုင်ငံ၏လူကြိုက်အများဆုံးရေဒီယိုစွမ်းရည်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်ပြီး၎င်း၏အဆင့်မြင့်သောရေဒီယိုပရိုဂရမ်းမင်းပုံစံများကိုပိုင်ဆိုင်ပြီးအသုံးပြုသောရေဒီယိုအသံလွှင့်ဌာနများ၊ တွဲဖက်ထားသောဘူတာများနှင့်ဆက်စပ်သောဒီဂျစ်တယ်မီဒီယာပစ္စည်းများမှတစ်ဆင့်ဖြန့်ဝေသည်။ LBI နှင့်လည်းအလားတူဖြစ်သည် Estrella တီဗီကွန်ယက်၎င်းသည်ပိုင်နှင့်လည်ပတ်သောတီဗီဘူတာများ၊ တီဗီကွန်ယက်ချိတ်ဆက်မှုများနှင့်ဆက်စပ်သောဒီဂျစ်တယ်မီဒီယာပစ္စည်းများမှတဆင့်ဖြန့်ဝေသည်။
LBI Media Inc. သည်အမေရိကန်မီဒီယာကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒါဟာအခြေစိုက်သည် Burbank, Californiaစပိန်စကားပြောဟစ်စပန်းနစ်အသိုင်းအဝိုင်းကိုအဓိကထားသည်။ ၎င်းသည်ရုပ်မြင်သံကြားနှင့်ရေဒီယိုအသံလွှင့်ရုံနှစ်ခုလုံးကိုထိပ်တန်းဟစ်စပန်းနစ်စျေးကွက်အများအပြားတွင်ပိုင်ဆိုင်သည် Estrella တီဗီ ကွန်ယက်ကို။
ပိုမိုသိရှိလိုပါက LBI မီဒီယာ၊ KBUE-FM၊ La Que Buena နှင့် Estrella တီဗီကွန်ယက်, ထို့နောက်ထွက်စစ်ဆေးပါ www.lbimedia.com/.
Sennheiser's 6000 Series သည်အသံလွှင့်ထုတ်လွှင့်သူများအတွက်အရည်အသွေးမြင့်အသံထုတ်လွှင့်ခြင်းကိုကမ်းလှမ်းသည် - မေလ 30, 2020
DekTec ၏ Quad 3G-SDI / ASI PCIe Card သည်ရုပ်သံလွှင့်သူများအတွက်ဗွီဒီယိုထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်ဖြန့်ဖြူးခြင်းကိုအားဖြည့်ပေးနိုင်သည် - မေလ 24, 2020
Draco vario ultra HDMI 2.0 သည်အရည်အသွေးမြင့်မားသောဗွီဒီယိုဖြန့်ဖြူးခြင်းကိုထုတ်လုပ်သည် - မေလ 24, 2020
Aurora ကနျြးမာရေးကင်ပိန်း / ကိုလိုနီထောက်ခံ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ Don Cheto Don Cheto ကွန်ယက် Estrella တီဗီကွန်ယက် ဂရေဟမ်ချပ်မန်း Prmoted toEditor ဟစ်စပန်းနစ်စျေး Inc က KBUE-FM KBUE-FM၊ La Que Buena LBI မီဒီယာ Los Angeles မြို့ မက္ကဆီကန်ရေဒီယို နံပါတ် 1 Premios de la ရေဒီယို ရေဒီယို တီဗီနည်းပညာ က Ultra HD ဖိုရမ် ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ် 2019-11-06
ယခင်: Insight တီဗီကသရဲခြောက်တဲ့ကော်မရှင်အသစ် Ghosters - အခြားဘက်ကိုစူးစမ်းခြင်း
နောက်တစ်ခု: နိုဝင်ဘာလအစည်းအဝေးတွင်“ Deepfakes” ကိုလေ့လာရန်ဟောလိဝုဒ်အပိုင်း SMPTE